မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒေါ်လာဈေး လက်ရှိထက်ကျဆင်းပါက ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်နိုင် – Zartiman
အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေး ၁၃၀၀ အောက်ရောက်သွားရင်တော့ နည်းနည်းလေးတော့ ဒုက္ခတွေ့နိုင်တာပေါ့နော်၊ အဓိက COVID လည်းဖြစ် နေတယ်၊ အခု အလုပ်သမားတွေကလည်း လုပ်ခလစာ တိုးတောင်း နေတယ်၊ order ( ကုန်အမှာ) တွေက လည်း မငြိမ်ဘူး၊ ရတဲ့ order ကလည်း ပို့ဖို့က နည်းနည်းခက်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ဆီမှာက အစအဆုံး ဘာမှမရှိနိုင်ဘူးလေ၊ ပိတ်ကအစ။ ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီး ဖြစ်လှချည်လို့ မပြောသေးပါဘူး၊ တာစူနေပြီပေါ့။ တည်ငြိမ်နေတဲ့ဟာလေး ဖြစ်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။
တချို့ကိစ္စက ထိန်းလို့မရဘူးလေ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်မှာ ငွေရှိတဲ့အခါကျတော့ လုပ်လို့ရတာတွေ အများကြီးရှိတာပေါ့။ ဆိုးဆိုးရွားရွား မဖြစ်ခင် အခြေအနေမှန်ကို သိဖို့တော့ လိုတာပေါ့။” မြန်မာကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အချက်အရဆိုရင် ၂၀၁၉ ကနေ ၂၀၂၀ ဧပြီလအထိ ပုံမှန်နဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ပို့ကုန်နဲ့သွင်းကုန် နှစ်ခုပေါင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၆၅၁. ၄၂၇ သန်းဖိုး ကုန်သွယ်ထားပြီး သွင်းကုန်ကတော့ အနည်းငယ် ပိုများနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်က အမေရိကန် ဒေါ်လာနဲ့ မြန်မာငွေလဲနှုန်း ကျဆင်းလာနေတဲ့အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာ ထိခိုက်လာမှာ စိုးရိမ်မှု တွေ ထွက်ပေါ်လာနေ ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ဒီနေ့ ဒေါ်လာနဲ့ကျပ်ငွေ လဲလှယ်နှုန်း ရည်ညွှန်း တန်ဖိုးဟာ ၁၃၇၁.၁ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ပြင်ပ ဘဏ်တွေမှာတော့ တဒေါ်လာကို ၁၃၆၀ ကျပ်လောက်သာ ဈေးပေါက်ပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်က ကြား ဝင်ထိန်းနေတဲ့ ကြားက ဒေါ်လာ ဈေး တဖြည်းဖြည်းကျလာတဲ့ အပေါ်မှာတော့ ပြည်တွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန သင်တန်းကျောင်းတာဝန်ခံ ဦးသိန်းမြင့်ဝေကတော့ ငွေလဲနှုန်း ကျပ်ငွေ ၁၂၀၀ အောက်အထိ ကျဆင်းမသွားဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ အခုလက်ရှိကတော့ ဗဟိုဘဏ်က ဝင်ရောက်ထိန်းကြောင်းနေတာပဲပေါ့၊ ဒါကတော့ သိသာထင်ရှားတဲ့ အချက်ကလေးပေါ့။ အဲဒီလို ဝင်ရောက် ထိန်းကြောင်းပေးလို့လည်း ကျသင့်ကျထိုက်တာထက် ပိုမကျဘူးလို့လည်း မြင်တာပေါ့နော်၊ ပထမ တချက်ကတော့။ ဒုတိယက အဲလို ၁၂၀၀ ( ကျပ်) အောက် ရောက်သွားမယ်ဆို သိပ်မကြိုက်ဘူးပေါ့ ။
ကျနော်တို့ အမြင်ကတော့။ ဒီ ၁၄၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကတော့ reasonable exchange rate ဖြစ်မယ်လို့တော့ မြင်တာပေါ့။” ပြည် တွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ အထူးသဖြင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာ ပို့ကုန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ရပြီး ဝန်ထမ်းတွေကို လစာ ရှင်းတဲ့အခါမှာ ကျပ်ငွေလဲလှယ်ရသလို ၊ လစာတိုးပေးညှိနှိုင်းတာတွေလည်းရှိလို့ ဒေါ်လာဈေး ဆက်ကျမယ်ဆိုရင်တော့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း တွေအတွက် အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုံ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသောင်းက ပြောပါတယ်။
ဒေါ်လာဈေးကျလို့ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေ စိုးရိမ်နေတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အညွှန်းကိန်းဟာ မေလထဲမှာ ၃၈.၉ ရှိနေရာကနေ ၄၈.၇ အထိ တိုးလာကြောင်း လန်ဒန်အခြေစိုက် စီးပွားရေးအကဲဖြတ်အဖွဲ့ IHS Markit ရဲ့ ဇူလိုင် ၂ရက်က ထုတ်ပြန် ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံအတှငျး ဒျေါလာဈေး လကျရှိထကျကဆြငျးပါက ကုနျထုတျလုပျငနျးတှေ ထိခိုကျနိုငျ
အမရေိကနျဒျေါလာစြေး ၁၃၀၀ အောကျရောကျသှားရငျတော့ နညျးနညျးလေးတော့ ဒုက်ခတှနေို့ငျတာပေါ့နျော၊ အဓိက COVID လညျးဖွဈ နတေယျ၊ အခု အလုပျသမားတှကေလညျး လုပျခလစာ တိုးတောငျး နတေယျ၊ order ( ကုနျအမှာ) တှကေ လညျး မငွိမျဘူး၊ ရတဲ့ order ကလညျး ပို့ဖို့က နညျးနညျးခကျနတေယျ။ အဲဒီတော့ ကနြျောတို့ ဆီမှာက အစအဆုံး ဘာမှမရှိနိုငျဘူးလေ၊ ပိတျကအစ။ ဆိုးဆိုးရှားရှားကွီး ဖွဈလှခညျြလို့ မပွောသေးပါဘူး၊ တာစူနပွေီပေါ့။ တညျငွိမျနတေဲ့ဟာလေး ဖွဈရငျ ပိုကောငျးတာပေါ့။
တခြို့ကိစ်စက ထိနျးလို့မရဘူးလေ ဒါပမေယျ့ နိုငျငံတျောမှာ ငှရှေိတဲ့အခါကတြော့ လုပျလို့ရတာတှေ အမြားကွီးရှိတာပေါ့။ ဆိုးဆိုးရှားရှား မဖွဈခငျ အခွအေနမှေနျကို သိဖို့တော့ လိုတာပေါ့။” မွနျမာကုနျသှယျရေးဝနျကွီးဌာန အခကျြအရဆိုရငျ ၂၀၁၉ ကနေ ၂၀၂၀ ဧပွီလအထိ ပုံမှနျနဲ့ နယျစပျကုနျသှယျရေး ပို့ကုနျနဲ့သှငျးကုနျ နှဈခုပေါငျးမှာ မွနျမာနိုငျငံက အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၂၆၅၁. ၄၂၇ သနျးဖိုး ကုနျသှယျထားပွီး သှငျးကုနျကတော့ အနညျးငယျ ပိုမြားနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးခငျက အမရေိကနျ ဒျေါလာနဲ့ မွနျမာငှလေဲနှုနျး ကဆြငျးလာနတေဲ့အတှကျ ကုနျထုတျလုပျငနျးတှမှော ထိခိုကျလာမှာ စိုးရိမျမှု တှေ ထှကျပျေါလာနေ ပါတယျ။မွနျမာနိုငျငံ ဗဟိုဘဏျရဲ့ ဒီနေ့ ဒျေါလာနဲ့ကပျြငှေ လဲလှယျနှုနျး ရညျညှနျး တနျဖိုးဟာ ၁၃၇၁.၁ ကပျြဖွဈပွီး ပွငျပ ဘဏျတှမှောတော့ တဒျေါလာကို ၁၃၆၀ ကပျြလောကျသာ ဈေးပေါကျပါတယျ။ ဗဟိုဘဏျက ကွား ဝငျထိနျးနတေဲ့ ကွားက ဒျေါလာ ဈေး တဖွညျးဖွညျးကလြာတဲ့ အပျေါမှာတော့ ပွညျတှငျး ကုနျထုတျလုပျငနျးရှငျတှေ စိုးရိမျနကွေပါတယျ။
ကုနျသှယျရေးဝနျကွီးဌာန သငျတနျးကြောငျးတာဝနျခံ ဦးသိနျးမွငျ့ဝကေတော့ ငှလေဲနှုနျး ကပျြငှေ ၁၂၀၀ အောကျအထိ ကဆြငျးမသှားဖို့ မြှျောလငျ့ကွောငျး ပွောပါတယျ။ အခုလကျရှိကတော့ ဗဟိုဘဏျက ဝငျရောကျထိနျးကွောငျးနတောပဲပေါ့၊ ဒါကတော့ သိသာထငျရှားတဲ့ အခကျြကလေးပေါ့။ အဲဒီလို ဝငျရောကျ ထိနျးကွောငျးပေးလို့လညျး ကသြငျ့ကထြိုကျတာထကျ ပိုမကဘြူးလို့လညျး မွငျတာပေါ့နျော၊ ပထမ တခကျြကတော့။ ဒုတိယက အဲလို ၁၂၀၀ ( ကပျြ) အောကျ ရောကျသှားမယျဆို သိပျမကွိုကျဘူးပေါ့ ။
ကနြျောတို့ အမွငျကတော့။ ဒီ ၁၄၀၀ ပတျဝနျးကငျြလောကျကတော့ reasonable exchange rate ဖွဈမယျလို့တော့ မွငျတာပေါ့။” ပွညျ တှငျး ကုနျထုတျလုပျငနျးတှေ အထူးသဖွငျ့ အထညျခြုပျလုပျငနျးတှဟော ပို့ကုနျအတှကျ အမရေိကနျဒျေါလာနဲ့ရပွီး ဝနျထမျးတှကေို လစာ ရှငျးတဲ့အခါမှာ ကပျြငှလေဲလှယျရသလို ၊ လစာတိုးပေးညှိနှိုငျးတာတှလေညျးရှိလို့ ဒျေါလာဈေး ဆကျကမြယျဆိုရငျတော့ ကုနျထုတျလုပျငနျး တှအေတှကျ အဆငျပွမှော မဟုတျဘူးလို့ ရှလေငျပနျးစကျမှုဇုံ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးအေးသောငျးက ပွောပါတယျ။
ဒျေါလာဈေးကလြို့ ပို့ကုနျလုပျငနျးရှငျတှေ စိုးရိမျနတေဲ့ တခြိနျတညျးမှာပဲ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ကုနျထုတျလုပျမှု အညှနျးကိနျးဟာ မလေထဲမှာ ၃၈.၉ ရှိနရောကနေ ၄၈.၇ အထိ တိုးလာကွောငျး လနျဒနျအခွစေိုကျ စီးပှားရေးအကဲဖွတျအဖှဲ့ IHS Markit ရဲ့ ဇူလိုငျ ၂ရကျက ထုတျပွနျ ခကျြမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
ထွေ/အုပ် ဌာန ကို အဂတိ မလိုက်စား ဖို့ ဒီကနေ့တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဆုံးမလိုက် တဲ့ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်”
ရန်ကုန်ရှိ မြို့နယ်အချို့တွင် အနံ့ပျောက် လူနာ အရေအတွက် များပြား လာပြီး ဆေးရုံ များတွင် နေရာလွတ် မရှိတော့ဟု ဆို